Fantaro anefa fa sady handrera-tsaina anao izany no hahatonga azy ho tofoka anao koa. Ahoana ary ny atao hialana amin’izany?
Mamosavy ny saina
Ny ao an-tsain’ny olona saro-piaro matetika dia ny hoe : « inona no mitranga rehefa tsy eo anilany aho »
· Io mihitsy no fototry ny olana. Matahotra ny zavatra mety hitranga sy ho ataony ianao rehefa tsy eo anilany. Heverinao fa manalavitra anao am-po koa mantsy izy rehefa lavitra anao ara-batana. Izay no antony mahatonga ny sainao mamorona tranga samihafa izay mandrehitra ny hasarotam-piaronao.
· Tokony ho tsapanao anefa fa izany rehetra izany dia vokatry ny ahiahinao manokana fa tsy hadisoana avy aminy akory. Tsy rariny noho izany raha izy no voatery hanamarina ny fihetsiny sy ny lalana ary ny zavatra ataony rehetra.
Ny akony any aminy
Mahatofoka vetivety ny vehivavy diso saro-piaro loatra. Ilay ianao te-hahafantatra foana ny misy azy sy izay ataony rehetra, ilay ianao lasa « polisy » fa tsy olon-tiana intsony satria mivadika ho fanadihadiana ny fifampiresahana matetika fa tsy ilay angolam-pitia sy fihantahanta intsony. Meteza ho eo amin’ny toerany iray minitra hoe : tianao ve ny hatao toy izany. Na dia tena tia anao aza izy dia mety ho leo ihany raha izany foana no iainany.
Omeo laharam-pahamehana ny tenanao
Tsy hisalasalana fa nomenao ny laharam-pahamehana rehetra ny fiarahanareo matoa ianao lasa diso saro-piaro aminy. Tsy hahitam-bokatsoa anefa izany raha toy izany foana. Ny mety dia ny fanomezanao laharam-pahamehana ny tenanao manokana indray. Mila miverina mamantatra ny tenanao ianao. Inona ny zavatra tianao hatao? inona ny tanjonao eo amin’ny fiainana? Ezaho valiana ireo filànao manokana mba hivelaranao amin’ny maha-olona sy amin’ny maha-vehivavy anao. Tsarovy fa toy izany ianao talohan’ny niarahanao taminy ary ilay ianao iny mihitsy no nitiavany anao. Ilay ianao sariaka, tsy dia be ahiahy, feno fanantenana, manana tetikasa, manana vina, manana ny alavolinao manokana sy ny namanao iny no nanintona azy. Fantaro koa fa rehefa manana ny fiainanao manokana ianao dia tsy hanam-potoana be loatra intsony hieritreretana momba ny hasarotam-piaronao. Ary ny farany kanefa tsy kely indrindra dia ho izy indray no hisarangotra aminao satria toa tsy dia miraikitra firy aminy intsony ianao.